I-L'Orangerie, indlu enkulu yezwe enengadi evulekile.
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Annelies
I-L'Orangerie inikeza isikhala nokuphumula kumaqembu amakhulu. I-gite ebanzi inamakamelo amaningana, atholakala emaphandleni avulekile kanye namagquma aseNormandy. Phuma uye emvelweni, vakashela imakethe yabalimi emizaneni eseduze, phumula engadini evulekile futhi ujabulele ukudla okuphekwe ekhaya okuvela ekhishini elivulekile noma ukunambitha kweCalvados.
Endaweni ungajabulela ukuqwala izintaba, ukugibela ibhayisekili, ukuhamba ngezikebhe nokunye okuningi okujabulisayo.
Neqembu ningakwazi ukuhlala ezindaweni ezahlukene endlini naseduze, endlini yokuphumula enkulu, ekhishini, endlini yokudlela noma ndawonye engadini. Kukhona negumbi elincane lapho izingane zingadlala khona umdlalo, indawo yokudlala engaphandle kanye nezindawo zokuhlala ezimbalwa engadini.
Kuningi ongakwenza kanye nesipiliyoni endaweni. I-Normandy iyindawo enhle. Phakathi nehora usemakethe, ogwini noma emabhishi e-D-Day.
Amakhilomitha ambalwa ukusuka endaweni yemvelo "i-Roche D'Oetre - lapho kuhlelwe khona ukuhamba okuhle, kunehlathi elikhuphukayo, ukugibela amahhashi, ikhefi kanye nendawo yokudlela ethokomele.
Vrolijke vrouw van 40 die van stedentrips houdt
Ngihlala endlini ehlukene kule ndawo. Ngenza isiqiniseko sokuthi ingadi isesimweni esihle, ngitholakala ukuze ngibuze imibuzo mayelana nendlu noma isifunda futhi ngikuvumela ukuba ujabulele iholide lakho ngokuthula.